Crush eguzogide ọgwụ Carbon Fiber Telescopic osisi N'ihi Solar nhicha osisi
Ogwe osisi telescoping carbon a na-amị amị n’enweghị nsogbu ọ bụla ma enwere ike ịkpọchi ya n’ogologo ọ bụla, dị mfe iji, dị mfe iburu ma dịkwa mfe ịchekwa. Enwere ike ịgbatị ha n'ogologo kachasị na nkeji ole na ole site na ịpụpụta na ịkpọchi ngalaba nke telescoping ọ bụla.
Nke a 100% carbon fiber telescopic pole bụ isiike na-etipịa na-eguzogide ọgwụ, ìhè-arọ na obere, na ruru a ise nke arọ nke ígwè na ọtụtụ ugboro ike, carbon eriri telescoping okporo osisi na-kwesịrị ruru eru dochie metal akpa / okporo.
Omenala fechaa Telescopic okporo osisi N'ihi panel nhicha Multi Agba
1.Ha dị oke mkpa na ọrụ nke ihicha windo na ịrụ ọrụ ahụ.
2.Iji naanị akụkụ dị mkpa iji belata ibu nke osisi mgbe ihicha windo
3. Ikwe ka arụ ọrụ ndị ọzọ na obere ike ọgwụgwụ.
Kenkowaputa 10m Gburugburu Carbon Telescopic osisi N'ihi Solar Panel nhicha
Solar panel nhicha pols na 25ft zuru okè maka ọtụtụ nhicha ọrụ, wuru nke 100% carbon eriri. Osisi telescopic a na-ekwenyeghi ekwenye, dị fechaa ma sie ezigbo ike. N'ebe ahụ, enwere ike ịmegharị ha n'ogologo ọ bụla, ma a na-ahapụ gị ka ịtinye ma ọ bụ wepu ngalaba iji kwado ogo ọrụ achọrọ, otu osisi maka ọrụ niile.
Ihe omuma a nwere ihe nkedo na mpempe mpempe akwụkwọ na-ejide osisi ahu nke oma karia ihe ndi ozo. Ọ na-adị mfe imeghe ma mechie ọbụna n'oge ọnwa oyi ahụ mgbe achọrọ gloves.
* Warning: Carbon Fiber bụ ezigbo onye nduzi eletrik. E nwere ike iji fiberglass mpụta oyi akwa mee okporo osisi anyị iji gbakwunye agwa mkpuchi.
Ìhè Arọ gburugburu faiba glaasi Gburugburu osisi High Ike N'ihi Solar Panel nhicha
Multifunction faiba glaasi telescopic anyanwụ ihicha osisi
100% High Modulus Carbon Fiber Telescoping osisi N'ihi Solar Panel nhicha
72FT Ìhè arọ elu mma telescopic osisi maka anyanwụ ihicha
20m carbon eriri anyanwụ panel nhicha osisi telescopic osisi.
15FT multi-ọtọ carbon eriri telescopic osisi anyanwụ ihicha osisi maka elu-apụghị iru na ogologo iru
1. Ọ nwere ike iru ma hichaa elu nke windo ụlọ akụkọ 2 n'enweghị nsogbu mgbe ọ na-agaghị ahapụ ala.
2. na-echekwa oge site na nhicha na ịsacha windo gị n'otu oge, ọ dịghị mkpa ka ị kpoo ma ọ bụ hichaa windo ahụ
3. Osisi ndị dị fechaa faiba glaasi na-ewu ga-eme ka ihicha windo gị dị mfe dịka nhicha ala gị
N'ebe anyị nọ, a pụrụ ịmegharị poolu ahụ n'ogologo ọ bụla, ma kwe ka ị gbakwunye ma ọ bụ wepu ngalaba iji kwado ogo ọrụ achọrọ. Ihie ọkụ nke poolu nwere ike inye aka belata ike ọgwụgwụ, mee ka arụ ọrụ na ọsọ ọsọ na ọrụ ahụ. Ga-ahụ na ọ dịkwuo mfe ịrụ ọrụ na osisi anyị.
18FT Carbon Fiber Poli / Telescopic faiba glaasi Solar Panel nhicha osisi
Nke a 18FT carbon eriri ndọtị osisi bụ stiif na-eyi na-eguzogide ọgwụ. Mere nke 100% carbon eriri, ha na-ìhè-arọ, obere, na ruru a ise nke arọ nke ígwè na ọtụtụ ugboro ike, carbon eriri telescoping okporo osisi ndị kwesịrị
20 Ft Carbon Fiber Telescopic osisi N'ihi Solar nhicha osisi UV Anụ
Multifunction Faiba glaasi anyanwụ panel ihicha osisi gọta nhicha
A na-ejikarị mkpanaka nhicha anyanwụ maka nhicha kwa ụbọchị na mmezi nke fotovoltaic. Nhazi nke mkpanaka telescopic na-egbo mkpa nke nhicha dị ogologo na nke sara mbara, nke dị nchebe ma nwee ntụkwasị obi.